မြန်မာမိန်းကလေးမှန်ရင် ဆံကေသာကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့်ဆံကေသာကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။
သင့်ဆံပင်ကို အုံကောင်းကောင်းနဲ့ အရှည်မြန်ချင်ရင်တော့ ဆံသားအဖျားပိုင်းက နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း၊ အဖျားရှူးခြင်း စတဲ့ မကောင်းတဲ့ အပိုင်းတွေကို ညှပ်ထုတ်ပစ်ရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ဆံပင်အုံထူထူနဲ့ မြန်မြန်ရှည်ချင်ရင် သင့်ဆံပင်အဖျားပိုင်းကိုဆံပင်ညှပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အဖျားတွေကို ညှပ်လိုက်ပါ။
၂။ သဘာဝဆေးဖက်ဝင်သီးနှံများကို အသုံးပြုပါ။
ဆံကေသာနဲ့ ဦးရေပြားအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ သဘာဝသီးများစွာရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်ခေါင်းလျော်တဲ့အခါ အဆိုပါပစ္စည်းများနဲ့ ရောနှောပြီး လျှော်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကြက်သွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆီးဖြူသီး၊ ကင်ပွန်းချဉ်၊ အုန်းနို့ စတဲ့ ဆံကေသာအတွက်အဟာရဖြစ်စေပြီး ဆံပင်ကြီးထွားနှုန်းကောင်းမွန်စေတဲ့ သီနှံများနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ခေါင်းလျော်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်နေပူထဲထွက်တဲ့အခါ နေရောင်ခြည်နဲ့ တိုက်ရိုက်မထိတွေ့နိုင်ရန် ဦးထုပ် သို့မဟုတ် ထီးကို အလေ့အထကို ပြုလုပ်ပေးပါ။
Hair mask from fresh fruits on woman head. Girl with beautiful face hold ingredient for homemade organic skin and hair therapy. Concept of healthy and beauty hair and skin. Woman resting in spa salon.
ဖြောင့်လိုက်၊ ကောက်လိုက်နဲ့ ဆံပင်အမျိုးမျိုး ပုံစံပြောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက် ဆံကေသာက ရှည်လျာဖို့ခက်ခဲတဲ့အပျက်၊ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုပြီး ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆံကေသာတွေအတွက် ပေါင်းတင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကို ဓာတုပေါင်းတင်ဆေးတွေအသုံးပြုတာထက် သဘာဝပစ္စည်းတွေက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ သင့်ဆံကေသာအတွက်လည်း အရမ်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ ပျားရည်၊ သံပုရာ၊ ထောပတ်သီး၊ သံလွင်ဆီ၊ ကြက်သွန် စတဲ့ သဘာဝပစ္စည်းများ၊ ဖျော်ရည်များကို အသုံးပြုပြီး တစ်ပတ်တစ်ခါ သို့မဟုတ် ၁၅ရက် တစ်ခါလောက် ပေါင်းတင်သင့်ပါတယ်။
ခေါင်းအုံးက သင့်ဆံပင်နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးမထင်ပါနဲ့။ မနက်ပိုင်း သင်အိပ်ယာထတာနဲ့ ဆံပင်တွေ ကျွတ်နေတဲ့တရာခံထဲမှာ ခေါင်းအုံးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ သင်အိပ်တဲ့ခေါင်းအုံးမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ ပိတ်သားက နူးညံ့မှုမရှိတဲ့အခါ ဆံသားများပြက်ထွက်ခြင်း ဆံပင်အလွယ်တကူ ငြိနိုင်ခြင်း စတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် သင့်ဆံပင်ကို ကျွတ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းအုံးရွေးချယ်တဲ့အခါ ဖဲသား ဒါမှမဟုတ် နူးညံ့မှုရှိတဲ့ ပိုးသား စတဲ့ ပိတ်သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ခေါင်းအုံးကို ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ဆံသားအခြောက်ခံတဲ့အခါ မျက်နှာသုတ်ပုဝါအကြမ်းကို အသုံးပြုခြင်းက ဆံသားကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဆံပင်ကို ရေခြောက်အောင် ပွတ်တိုက်ပြီး သုတ်တဲ့အခါ မျက်နှာသုတ်ပုဝါက နူးညံ့မှုမရှိတာကြောင့် ဆံမျှင်များငြိတွယ်ပြီး ပျက်စီးစေပါတယ်။ အပူပေးလေမှုတ်စက် (Dryer) အသုံးပြုခြင်းကလည်း ဆံသားကို ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ခေါင်းလျော်ပြီး ဆံပင်ကိုအခြောက်ခံတဲ့အခါ ပထမဦးစွာ သင့်ဆံပင်ကို နူးညံ့မှုရှိတဲ့ ပုဝါစနဲ့ အရင် ၆၀%လောက်ခြောက်အောင် အရင်သုတ်ပါ။ ပြီးလျှင်သင့်ဆံပင်ကို ပန်ကာဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုးလေအေးနဲ့ပဲ အခြောက်ခံသင့်ပါတယ်။
ဆံကေသာကောင်းမွန်ဖို့အတွက် နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့အစားအစာနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်များက ဆိုပါတယ်။ ဆံကေသာအတွက် အခွံမာသီး၊ ဝက်သား၊ အသည်း၊ ငါး၊ ဆော်လမွန်၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ထောပတ်သီး၊ နို့၊ ဒိန်ခဲ၊ ကြက်ဥအမျိုးမျိုးနဲ့ ဗီတာမင် H ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာများကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။
၇။ အုန်ဆီနဲ့ ကြက်သွန်နီဖျော်ရည်ပေါင်းစပ်ပြီး ပေါင်းတင်နည်း
ကြက်သွန်နီက ဆံပင်အတွက်တော့မြေသြဇာတစ်ခုလိုပါပဲ။ ဆံပင်မပေါင်သူတွေအတွက် ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလဲဖြစ်ပြီး ကြက်သွန်နီဟာဆံသားကြီးထွားနှုန်းကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပြီး ဆံသားပင်စည်အထိ လိုအပ်တဲ့ အဟာရဓာတ်ကို ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အုန်းဆီဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့ ဆံပင်အတွက် မိရိုးဖလာအသုံးပြုလာတဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းဆီဟာ ဆံသားခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ဆံသားအရောင်မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်ခြင်းစတဲ့ ပြဿတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး ဗီတာမင် E နဲ့Lauric အက်ဆစ်ကြွယ်ဝတဲ့ ဆီတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းဆီ/ မုန်းညင်းဆီ/ ဗာဒံဆီ စတဲ့ ဆီတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ကြက်သွန်နီဖျော်ရည်ကိုပေါင်းစပ်ပြီး သင့်ခေါင်းကို ပေါင်းတင်ပေးပါက သိပ့်မကြာခင်အချိန်မှာ ထူးကဲတဲ့ရလဒ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံထဲမှာ လုံးဝ Perfect ဖြစ်နေစေမယ့် အကြံပြုချက် (၁၄)ခု
ပုရိသယောကျြားလေးတှအေကုနျ တနျဖိုးထားတဲ့ ဆံကသောကို ပြိုမတေို့ ဘယျလိုထိနျးသိမျးမလဲ
မွနျမာမိနျးကလေးမှနျရငျ ဆံကသောကို တနျဖိုးထားတတျတဲ့သူတှခေညျြးပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ဆံကသောကိုဘယျလိုဂရုစိုကျမလဲလလေ့ာကွညျ့ရအောငျနျော။
သငျ့ဆံပငျကို အုံကောငျးကောငျးနဲ့ အရှညျမွနျခငျြရငျတော့ ဆံသားအဖြားပိုငျးက နှဈခှဖွဈခွငျး၊ အဖြားရှူးခွငျး စတဲ့ မကောငျးတဲ့ အပိုငျးတှကေို ညှပျထုတျပဈရပါမယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ဆံပငျအုံထူထူနဲ့ မွနျမွနျရှညျခငျြရငျ သငျ့ဆံပငျအဖြားပိုငျးကိုဆံပငျညှပျကြှမျးကငျြတဲ့သူတဈယောကျယောကျနဲ့ အဖြားတှကေို ညှပျလိုကျပါ။
၂။ သဘာဝဆေးဖကျဝငျသီးနှံမြားကို အသုံးပွုပါ။
ဆံကသောနဲ့ ဦးရပွေားအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ သဘာဝသီးမြားစှာရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျခေါငျးလြျောတဲ့အခါ အဆိုပါပစ်စညျးမြားနဲ့ ရောနှောပွီး လြှျောသငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ- ကွကျသှနျ၊ ကွကျသှနျဖွူ၊ ဆီးဖွူသီး၊ ကငျပှနျးခဉျြ၊ အုနျးနို့ စတဲ့ ဆံကသောအတှကျအဟာရဖွဈစပွေီး ဆံပငျကွီးထှားနှုနျးကောငျးမှနျစတေဲ့ သီနှံမြားနဲ့ ပေါငျးစပျပွီး ခေါငျးလြျောသငျ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျနပေူထဲထှကျတဲ့အခါ နရေောငျခွညျနဲ့ တိုကျရိုကျမထိတှနေို့ငျရနျ ဦးထုပျ သို့မဟုတျ ထီးကို အလအေ့ထကို ပွုလုပျပေးပါ။
ဖွောငျ့လိုကျ၊ ကောကျလိုကျနဲ့ ဆံပငျအမြိုးမြိုး ပုံစံပွောငျးနတေဲ့သူတှအေတှကျ ဆံကသောက ရှညျလြာဖို့ခကျခဲတဲ့အပကျြ၊ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ ပိုပိုပွီး ပကျြစီးလှယျပါတယျ။ ဒီလိုဆံကသောတှအေတှကျ ပေါငျးတငျဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဆံပငျကို ဓာတုပေါငျးတငျဆေးတှအေသုံးပွုတာထကျ သဘာဝပစ်စညျးတှကေ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမရှိဘဲ သငျ့ဆံကသောအတှကျလညျး အရမျးကောငျးမှနျပါတယျ။ ပြားရညျ၊ သံပုရာ၊ ထောပတျသီး၊ သံလှငျဆီ၊ ကွကျသှနျ စတဲ့ သဘာဝပစ်စညျးမြား၊ ဖြျောရညျမြားကို အသုံးပွုပွီး တဈပတျတဈခါ သို့မဟုတျ ၁၅ရကျ တဈခါလောကျ ပေါငျးတငျသငျ့ပါတယျ။
ခေါငျးအုံးက သငျ့ဆံပငျနဲ့ မသကျဆိုငျဘူးမထငျပါနဲ့။ မနကျပိုငျး သငျအိပျယာထတာနဲ့ ဆံပငျတှေ ကြှတျနတေဲ့တရာခံထဲမှာ ခေါငျးအုံးလညျးပါဝငျပါတယျ။ သငျအိပျတဲ့ခေါငျးအုံးမှာ အသုံးပွုထားတဲ့ ပိတျသားက နူးညံ့မှုမရှိတဲ့အခါ ဆံသားမြားပွကျထှကျခွငျး ဆံပငျအလှယျတကူ ငွိနိုငျခွငျး စတဲ့ ပွဿနာတှကွေောငျ့ သငျ့ဆံပငျကို ကြှတျစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခေါငျးအုံးရှေးခယျြတဲ့အခါ ဖဲသား ဒါမှမဟုတျ နူးညံ့မှုရှိတဲ့ ပိုးသား စတဲ့ ပိတျသားနဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ ခေါငျးအုံးကို ရှေးခယျြအသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။
ဆံသားအခွောကျခံတဲ့အခါ မကျြနှာသုတျပုဝါအကွမျးကို အသုံးပွုခွငျးက ဆံသားကို ထိခိုကျပကျြစီးစပေါတယျ။ ဆံပငျကို ရခွေောကျအောငျ ပှတျတိုကျပွီး သုတျတဲ့အခါ မကျြနှာသုတျပုဝါက နူးညံ့မှုမရှိတာကွောငျ့ ဆံမြှငျမြားငွိတှယျပွီး ပကျြစီးစပေါတယျ။ အပူပေးလမှေုတျစကျ (Dryer) အသုံးပွုခွငျးကလညျး ဆံသားကို ပကျြစီးဆုံးရှုံးစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ခေါငျးလြျောပွီး ဆံပငျကိုအခွောကျခံတဲ့အခါ ပထမဦးစှာ သငျ့ဆံပငျကို နူးညံ့မှုရှိတဲ့ ပုဝါစနဲ့ အရငျ ၆၀%လောကျခွောကျအောငျ အရငျသုတျပါ။ ပွီးလြှငျသငျ့ဆံပငျကို ပနျကာဖွဈဖွဈ ရိုးရိုးလအေေးနဲ့ပဲ အခွောကျခံသငျ့ပါတယျ။
ဆံကသောကောငျးမှနျဖို့အတှကျ နစေ့ဉျစားသောကျတဲ့အစားအစာနဲ့လညျးသကျဆိုငျပါတယျလို့ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက ဆိုပါတယျ။ ဆံကသောအတှကျ အခှံမာသီး၊ ဝကျသား၊ အသညျး၊ ငါး၊ ဆျောလမှနျ၊ ပနျးဂျေါဖီ၊ ထောပတျသီး၊ နို့၊ ဒိနျခဲ၊ ကွကျဥအမြိုးမြိုးနဲ့ ဗီတာမငျ H ကွှယျဝတဲ့အစားအစာမြားကို စားသုံးသငျ့ပါတယျ။
၇။ အုနျဆီနဲ့ ကွကျသှနျနီဖြျောရညျပေါငျးစပျပွီး ပေါငျးတငျနညျး
ကွကျသှနျနီက ဆံပငျအတှကျတော့မွသွေဇာတဈခုလိုပါပဲ။ ဆံပငျမပေါငျသူတှအေတှကျ ထိရောကျတဲ့ နညျးလမျးတဈခုလဲဖွဈပွီး ကွကျသှနျနီဟာဆံသားကွီးထှားနှုနျးကို ပိုမိုတိုးမွှငျ့ပေးနိုငျပွီး ဆံသားပငျစညျအထိ လိုအပျတဲ့ အဟာရဓာတျကို ဖွညျ့စှမျးပေးနိုငျပါတယျ။ အုနျးဆီဆိုတာလညျး ကြှနျတျောတို့ ဆံပငျအတှကျ မိရိုးဖလာအသုံးပွုလာတဲ့ နညျးလမျးလေးတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ အုနျးဆီဟာ ဆံသားခွောကျသှခွေ့ငျး၊ ဆံသားအရောငျမှဲခွောကျခွောကျဖွဈခွငျးစတဲ့ ပွဿတှကေို ဖွရှေငျးပေးနိုငျပွီး ဗီတာမငျ E နဲ့Lauric အကျဆဈကွှယျဝတဲ့ ဆီတဈမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။ အုနျးဆီ/ မုနျးညငျးဆီ/ ဗာဒံဆီ စတဲ့ ဆီတဈမြိုးမြိုးနဲ့ ကွကျသှနျနီဖြျောရညျကိုပေါငျးစပျပွီး သငျ့ခေါငျးကို ပေါငျးတငျပေးပါက သိပျ့မကွာခငျအခြိနျမှာ ထူးကဲတဲ့ရလဒျတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။